Xisbiga Moderaterna oo soo jeediyay markhaati qarsoon - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Af-hayeenka dhanka shuruucda ee xisbiga Moderaterna Tobias Tobé oo fikirkan difaacay. sawir: TT. Montage: Sveriges Radio.
Xisbiga Moderaterna oo soo jeediyay markhaati qarsoon
Xisbiga Modaraad-ka oo albaabka u furey in markhaatiyada la qariyo.
La daabacay tisdag 10 oktober 2017 kl 08.41
Hoggaanka xisbiga Moderaterna (M) ayaa albaabbada u furay fikirka in qarsoodi laga dhigi karo markhaatiyada dembiyada culus.
Waa fikir ka mid ah fikirrada dhanka shuruucda la xiriira ee uu hoggaanka xisbigu soo ban-dhigay inta aan la gaarin shir-weynaha xisbiga oo khamiista albaabbada loo furi doono, sida ay werisay laanta wararka ee Ekot.
Fikirka la xiriira markhaatiga dahsoon ayaa ah mid la isku khilaaf-san yahay. Tomas Tobé (M), af-hayeenka siyaasadda cadaaladda ayaa ka mid ah dadyoowga u ololeeynaya fikirkaa. Hase yeeshee aamin-san in la isticmaalo marar dhif ah oo keliya.
Mashaakilka ugu weyn ee arrinkaan hortaagan ayaa ah in dad badani ay aaminsan yihiin in aysan suurtagal aheyn in markhaati cid kale ay ku furaan taas oo macneheedu yahay in danbiilayaal badan oo burcad ah aan maxkamad la soo taagi karin.
Tomas Tobé (M), oo ah af-hayeenka xisbiga Modaraad-ka u qaabilsan dhanka cadaaladda ayaa intaas ku darey in xisbi ahaan ay diyaar u yihiin ka dhabeynta arrinkaas inkastoo ay tahay arrin aan sahlaneyn.
Kal fadhiga xisbiga Modaraad-ka oo maalinta khamiista ah furmaya ayaa waxaa la soo hordhigey talooyin cusub oo fikirrada siyaasadda ee caddaaladda la xiriira.
Talooyinkaas cusub waxaa ka mid ah in qofkii markhaati ku fura danbiyada waaweyn, in uu ahaado mid la qariyo magaciisa iyo shakhsiga uu yahay labadaba markuu markhaatigaas furo ka dib.
Tomas Tobé oo ah afhayeenka xisbiga Modaraad-ka ee dhanka cadaaladda ayaa aaminsan in habka noocaas ah loo isticmaalo oo kaliya qadiyado gaar ah, wuxuuna yiri sidan :
-Waa dhab in arrinkaani yahay mid ka badalan nidaamka maxkamadeed ama sharci ee aanu dalkaan Sweden ku isticmaalno laakiin sidaas oo ay tahay waxaan qabaa in ay muhiim tahay in habkaas la isticmaalo markii maxkamadda kiiskaas qaadeysaa uu yar yahay caddeynta ay kiiskaas u heyso, ayuu yiri Tomas Tobé.
Xisbiyada Sverigedemokrati-ga iyo Kristdemokrati-ga ayaa iyguna raba in la ogolaado markhaatigaas la qariyo, xisbiga Libaraal-ka ayaa isna golihiisa sare wuxuu ku fakarayaa in arrinkaas uu isla qaato kulankiisa uu yeelan doono xilliga deyrta.
Xisbiga Modaraad-ka ayaa isna dood arrinkaas ku saabsani waxay u socotaa golihiisa sare inkastoo ay jiraan xubno xisbigaas ka tirsan oo arrinkaas ka biya diidan.